Samsung dia miteny amin'ny mpampiasa: vonoy ny Galaxy Note 7 ANAO | Vaovao momba ny gadget
Samsung dia manazava azy amin'ny fomba ofisialy: vonoy ny Galaxy Note 7 ANAO
Sarimihetsika mampihoron-koditra ity izay tao anatin'ny roa volana dia nahita premiere maromaro izahay, satria manana olana lehibe ny Galaxy Note 7, manova ny finday finday avo lenta izahay ary manana iray vaovao ianao, amin'ilay smartphone vaovao nandefasanay anao sy mirehitra na dia tsy andoavanao izany aza.
Omaly nihaona izahay fa ny mpamokatra Koreana dia nitsahatra tsy namokatra ny Samsung Galaxy Note 7 raha ora vitsy lasa izay dia naka famoahana ofisialy izany mba hilazana amin'ireo mpaninjara sy mpandraharaha hampitsahatra ny fivarotana ny smarthone. Nanoro hevitra ireo mpampiasa azy koa izany vonoy ny telefaoninao Fanamarihana 7 avy hatrany.
Samsung dia efa nazava be ary mampitandrina fa tokony hamono ny Note 7 ianao na eny. Sarimihetsika mampihoron-koditra izay nosokafana ora vitsy lasa izay sy ny tsena tao Seoul, ny anjarany nilatsaka 5% ny tsena. Fijaliana mafy ho an'ny iray amin'ireo orinasa mandroso indrindra any Korea Atsimo izany, ary na dia zaraina mihomehy aza ireo meme, ity olana iray ity dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny mpiasa ao amin'io firenena io.
Nipoitra ny olana tamin'ny voalohan'ny volana septambra raha hita fa mpampiasa maro no nitatitra izany nirehitra ny Galaxy Note 7-ny rehefa enta-mavesatra izy ireo. Noraisin'i Samsung tamin'ny tandrony ilay omby ary natombony ny programa fampatsiahivana hanoloana fitaovana 2,5 tapitrisa. Niverina indray ny olana rehefa nirehitra ireo nisolo ny Note 7 nefa tsy voampanga akory.
Hetsika tsy mahazatra ho an'i Sasmung sy ho an'ny tontolon'ny teknolojia io. Tsy hamitaka ny tenanay isika fa ny ampahany tokony hampitandremana ny mpampiasa hamono ny finday avo lenta dia zava-baovao tanteraka ho antsika. Na avy any Apple ianao na Samsung dia a olana eo an-tampon'ny teknolojia, satria ireo Note 7 ireo no prop amin'ny singa sy famolavolana ka niafara tamin'ny fipoahan'ny tànan'ny mpampiasa azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Samsung dia manazava azy amin'ny fomba ofisialy: vonoy ny Galaxy Note 7 ANAO
O tsy mahantra ireo izay nividy terminal amin'ireo hilazana izany! ?
serivisy ara-teknika izay mahatonga ahy hahatsapa ho malahelo toa ny nanjavonan'ny ozinin'izy ireo tao amin'ny sari-tany. mpanjifa tsy afa-po tompona S6.
Omeo iPhone fanoloana izy ireo
Notehiriziko io ary heveriko fa Q dia tsy hanana azy intsony aho fa raha mitodika am-pitaintainana miandry ny fanamarihana avo lenta sy avo lenta 8 araka izay hitako fa misy daty
Aza mahazo Apple amin'izany! Betsaka na manonona azy eto! Tsy misy hita, Samsung no mitarika, fa tsy Apple! AARGH !!
Inona avy ireo vahaolana mety ho azon'i Samsung amin'ny krizy Galaxy Note 7?